Burcad dalbatay in madaxfurasho laga siiyo labo Kenyan ah oo laga afduubay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Burcad dalbatay in madaxfurasho laga siiyo labo Kenyan ah oo laga afduubay Muqdisho
24th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Xarardheere – Mareeg.com: Koox-burcad badeed Soomaali ah oo ku sugan degmada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa dalbaday ilaa 80 Milayn oo shilinka Kenya ah si ay usii daayaan labo Injineer oo Kenyan ah oo bartamihii bishii Janaayo ee sanadkaan laga afduubay degmada Hodon ee magaaalada Mqudisho, xilli ay halkaas dhisme ka hayeen.
Sida ay sheegtay Capital FM oo ku taalla magaalada Nairobi, labada injineer ee Kenyanka ah ayaa markii laga afduubay Muqdisho la geeyey degmada Xarardheere ee gobolka Mudug, halkaasoo horay uga mid aheyd meelaha ay ku xooganaayeen burcad badeedda Soomaalida intii aysan is dhimin.
“Waxaan weli la xiriireynaa qoysaska labadan Injineer, laakiin waxaa naloo xaqiijiyey iney gacanta ugu jiraan rag hubeysan oo Soomaali ah” sida waxaa warbaahinta magaalada Mombasa ugu sheegay Xoghayaha Guud ee Ururka Midowga badaha Kenya, Andrew Mwangura.
Wuxuu sheegay Andrew Mwangura in labada Injineer ee afduubka loo heysto ay haatan nabad qaabaan, hase ahaatee kooxda heysto ka doonayaan lacag madax-furasho ah.
“Wararka ayaa tilmaamaya in labada injineer ammaan yihiin, islamarkaana dableyda hubaysan dalbanayaan lacag madax-furasho ah si loo sii daayo” ayuu sidoo kale yiri Andrew Mwangura.
Waxa uu sheegay Andrew Mwangura in koox maleeshiyo reer Xarardheere ah, kana soo jeeda beesha Habargidir ay sheegteen mas’uuliyadda afduubka labadaas Injineer, islamarkaana doonayaan madax-furasho. Falalka burcad badeedda Soomaalida ayaa hoos u dhac weyn laga dareemay labadii sano ee lasoo dhaafay, iyagoo markaan bilaabay iney afdubaan shaqaalaha ajnabiga ah ee dalka Soomaaliya loo keeno howlo kala duwan.
Labada Injineer ee Kenyanka ah ee bishii Janaayo laga afduubay Muqdisho ayaa waxaa dalka keenay ganacsato Soomaali ah, waxeyna ku howlanaayeen dhisme ay ganacsatadaasi ka dhisanayeen degmada Hodon.
Somali pirates seek Sh 80 milion to free 2 Kenyans
Wasiirka arrimaha debadda Itoobiya iyo madaxweynaha maamulka Puntland oo kulmay Addis Ababa